ဘယျခန်ဓာကိုယျအနအေထားနဲ့ အိပျတာက နောကျကြောနာတာကို သကျသာစသေလဲ? - Lifestyle Myanmar
ဘယျခန်ဓာကိုယျအနအေထားနဲ့ အိပျတာက နောကျကြောနာတာကို သကျသာစသေလဲ?
လူဦးရေ ၈၀ရာခိုငျနှုနျးခနျ့က သူတို့ဘဝမှာ အနညျးဆုံးတဈကွိမျတော့ ကြောနာတာကို ခံစားဖူးပါလိမျ့မယျ။ ကြောနာ၊ခါးနာတာက အလေးအပငျ မမိလို့ ဖွဈပျေါလာနိုငျသလို အနအေထိုငျပုံစံ၊ အိပျစကျမှုပုံစံ မှားယှငျးနတောကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုခါးနာ၊ ကြောနာတာမဖွဈအောငျ အိပျတဲ့အခါ နောကျကြောကို ဖိအားအလှနျအကြှံသကျရောကျစတေဲ့ ကိုယျနဟေနျထားပုံစံကို ရှောငျကွဉျခွငျးဖွငျ့ ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
၁။ လညျပငျးနှငျ့ ကြောအထကျပိုငျး နာကငျြလြှငျ
ပကျလကျအိပျတဲ့အခါ သငျ့ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျက ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတဈခုစီပျေါမှာ အညီအမြှဖွဈသှားတာကွောငျ့ လညျပငျးနဲ့ နောကျကြောအထကျပိုငျးကို ဖိအားသကျရာကျမှုနညျးသှားစပေါတယျ။ ဒါက အတှငျးပိုငျး ကိုယျတှငျးအင်ျဂါနဲ့ ကြောရိုးကိုလညျး ညီညာစပေါတယျ။ ပိုပွီး သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈစဖေို့ လညျပငျးနှငျ့ ဒူးအောကျမှာ ခေါငျးအုံးပါးပါးလေးတှေ ခုပွီးအိပျပေးပါ။ သငျ့ကြောရိုးရဲ့ သဘာဝအကှေးကို ပုံမပကျြစအေောငျ ထိနျးသိမျးပေးပါလိမျ့မယျ။
၂။ ကြောရိုးတဈလြှောကျ နာကငျြလြှငျ
ဒါက မြားသောအားဖွငျ့ မှောကျခုံအိပျတတျသူတှအေတှကျ အိပျစကျပုံအနအေထားကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ သူတို့အတှကျ တခွားအနအေထားနဲ့ အိပျပြျောဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ သငျက မှောကျခုံအိပျတတျသူဖွဈရငျ သငျ့တငျပါးဆုံရဲ့ အပျေါပိုငျးနဲ့ ဗိုကျအောကျမှာ ခေါငျးအုံးတဈလုံးခုအိပျပါ။ ခေါငျးအုံးက ခပျပါးပါးဖွဈပွီး ၃လကျမထကျ မထူရပါဘူး။ ဗိုကျအောကျမှာ ခေါငျးအုံးခံပွီးအိပျတာက သငျ့ကြောပျေါကို ဖိအားလြော့ကစြပေါတယျ။ နောကျတနညျးက သငျ့ခေါငျးအောကျက ခေါငျးအုံးကိုဖယျပွီး အိပျကွညျ့ပါ။
၃။ ကြောအောကျပိုငျး နာကငျြလြှငျ
ဘေးစောငျးအိပျတဲ့အခါ သဘာဝမကတြဲ့ အနအေထားတဈခုနဲ့ သငျ့ကြောရိုးအကှေးကို ဖိအားသကျရောကျစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ဒူးတှကေို အနညျးငယျ ကှေးပွီး ဒူးနှဈလုံးကွားမှာ ခေါငျးအုံးတဈလုံးထားပွီး အိပျကွညျ့ပါ။ ဒီနညျးလမျးက ကြောအောကျပိုငျး နာတာတှေ မဖွဈစပေါဘူး။
ခါးနာနလြှေငျ ကြောတဈဝကျမှီနတေဲ့ အနအေထားနှငျ့ အိပျတာက သငျ့ကို သကျတောငျ့သကျသာဖွဈစမှောပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့လညျပငျးနဲ့ ကြောနောကျမှာ ခေါငျးအုံးသို့ ကူရှငျ နှဈလုံးဆငျ့ပွီးအိပျတာ သငျ့ကြောရိုးကို ထိနျးညှိပေးပါတယျ။ ပိုပွီး သကျတောငျ့သကျသာဖွဈအောငျ ဒူးအောကျနှငျ့ ခွထေောကျအောကျမှာ ခေါငျးအုံးအသေးတှေ ခံပေးထားပါ။
၅။ အကွောတှေ တောငျ့တငျးနလြှေငျ
အိပျရာကနိုးတာနဲ့ အကွောတှတေောငျ့တငျးတာကို ခံစားဖူးကွမှာပါ။ ဒီလိုမခံစားရအောငျ ဒူးနှဈဖကျကို ရငျဘတျနားထိ ကှေးပွီး ဘေးစောငျးအိပျကွညျ့ပါ။ ဒီအနအေထားက သငျ့အာရုံကွောမြားနှငျ့ vertebrae ပျေါမှာ ဖိအားလြှော့သှားစပွေီး ကြောနာတာကို သကျသာစပေါတယျ။
သငျအိပျနကြေ အိပျစကျမှုပုံစံကို ပွောငျးလဲဖို့က အရမျးခကျခဲတယျလို့ ထငျပါလိမျ့မယျ၊ ဒါပမေယျ့ ရကျအနညျးငယျပါပဲ။ နောကျပိုငျး သငျ့ကိုနာကငျြမှုကငျးပွီး သကျတောငျ့သကျသာနိုးစမှောပါ။
ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားနဲ့ အိပ်တာက နောက်ကျောနာတာကို သက်သာစေသလဲ?
လူဦးရေ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းခန့်က သူတို့ဘဝမှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တော့ ကျောနာတာကို ခံစားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ကျောနာ၊ခါးနာတာက အလေးအပင် မမိလို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလို အနေအထိုင်ပုံစံ၊ အိပ်စက်မှုပုံစံ မှားယွင်းနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုခါးနာ၊ ကျောနာတာမဖြစ်အောင် အိပ်တဲ့အခါ နောက်ကျောကို ဖိအားအလွန်အကျွံသက်ရောက်စေတဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားပုံစံကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ လည်ပင်းနှင့် ကျောအထက်ပိုင်း နာကျင်လျှင်
ပက်လက်အိပ်တဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်က ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီပေါ်မှာ အညီအမျှဖြစ်သွားတာကြောင့် လည်ပင်းနဲ့ နောက်ကျောအထက်ပိုင်းကို ဖိအားသက်ရာက်မှုနည်းသွားစေပါတယ်။ ဒါက အတွင်းပိုင်း ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနဲ့ ကျောရိုးကိုလည်း ညီညာစေပါတယ်။ ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေဖို့ လည်ပင်းနှင့် ဒူးအောက်မှာ ခေါင်းအုံးပါးပါးလေးတွေ ခုပြီးအိပ်ပေးပါ။ သင့်ကျောရိုးရဲ့ သဘာဝအကွေးကို ပုံမပျက်စေအောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါလိမ့်မယ်။
၂။ ကျောရိုးတစ်လျှောက် နာကျင်လျှင်
ဒါက များသောအားဖြင့် မှောက်ခုံအိပ်တတ်သူတွေအတွက် အိပ်စက်ပုံအနေအထားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် တခြားအနေအထားနဲ့ အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ သင်က မှောက်ခုံအိပ်တတ်သူဖြစ်ရင် သင့်တင်ပါးဆုံရဲ့ အပေါ်ပိုင်းနဲ့ ဗိုက်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးခုအိပ်ပါ။ ခေါင်းအုံးက ခပ်ပါးပါးဖြစ်ပြီး ၃လက်မထက် မထူရပါဘူး။ ဗိုက်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးခံပြီးအိပ်တာက သင့်ကျောပေါ်ကို ဖိအားလျော့ကျစေပါတယ်။ နောက်တနည်းက သင့်ခေါင်းအောက်က ခေါင်းအုံးကိုဖယ်ပြီး အိပ်ကြည့်ပါ။
၃။ ကျောအောက်ပိုင်း နာကျင်လျှင်
ဘေးစောင်းအိပ်တဲ့အခါ သဘာဝမကျတဲ့ အနေအထားတစ်ခုနဲ့ သင့်ကျောရိုးအကွေးကို ဖိအားသက်ရောက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဒူးတွေကို အနည်းငယ် ကွေးပြီး ဒူးနှစ်လုံးကြားမှာ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးထားပြီး အိပ်ကြည့်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းက ကျောအောက်ပိုင်း နာတာတွေ မဖြစ်စေပါဘူး။
ခါးနာနေလျှင် ကျောတစ်ဝက်မှီနေတဲ့ အနေအထားနှင့် အိပ်တာက သင့်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်လည်ပင်းနဲ့ ကျောနောက်မှာ ခေါင်းအုံးသို့ ကူရှင် နှစ်လုံးဆင့်ပြီးအိပ်တာ သင့်ကျောရိုးကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ဒူးအောက်နှင့် ခြေထောက်အောက်မှာ ခေါင်းအုံးအသေးတွေ ခံပေးထားပါ။
၅။ အကြောတွေ တောင့်တင်းနေလျှင်
အိပ်ရာကနိုးတာနဲ့ အကြောတွေတောင့်တင်းတာကို ခံစားဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုမခံစားရအောင် ဒူးနှစ်ဖက်ကို ရင်ဘတ်နားထိ ကွေးပြီး ဘေးစောင်းအိပ်ကြည့်ပါ။ ဒီအနေအထားက သင့်အာရုံကြောများနှင့် vertebrae ပေါ်မှာ ဖိအားလျှော့သွားစေပြီး ကျောနာတာကို သက်သာစေပါတယ်။
သင်အိပ်နေကျ အိပ်စက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲဖို့က အရမ်းခက်ခဲတယ်လို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ရက်အနည်းငယ်ပါပဲ။ နောက်ပိုင်း သင့်ကိုနာကျင်မှုကင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာနိုးစေမှာပါ။